အမေရိကန်တရားမျှတမှုပျက် B737 Max Victims သည်ဘိုးအင်းအတွက်အခွင့်အရေးမရှိပါ လေကြောင်းလိုင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » လေကြောင်းလိုင်း » အမေရိကန်တရားမျှတမှုပျက် B737 Max Victims များသည်ဘိုးအင်းအတွက်အခွင့်အရေးမရှိပါ
လေကြောင်းလိုင်း • လေကြောင်းသတင်း • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အီသီယိုးပီးယားခရီးသွားသတင်း • အစိုးရရေးရာ • အင်ဒိုနီးရှားခရီးသွားသတင်း • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • သတင်းများပြုလုပ်ခြင်း • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားများအတွက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှု • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွားလာရေးဟောပြောချက် • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းသတင်းများ • ယူအက်စ်အေသတင်းများ
အမေရိကန်တရားမျှတမှုပျက် B737 Max Victims များသည်ဘိုးအင်းအတွက်အခွင့်အရေးမရှိပါ
ကုမ္ပဏီကြီး (Boeing) ကိုရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုသည်ရှေ့နေသည်အမှုပြီး။ လအတော်ကြာသည့်တိုင်သူမ၏အကြီးမားဆုံးအမှုကိုကာကွယ်သည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းပါကမည်သို့ခေါ်မည်နည်း။ ၎င်းကို Boeing modus operandi ဟုခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ် US တရားမျှတမှုကိုငြင်းဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Boeing 346 MAX လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့်လူပေါင်း ၃၄၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး Ethiopia လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အစောပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားရှိ Lyon Air လေယာဉ်ပျံတွင်ပျက်ကျခဲ့သည်။ Boeing ကိုရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုအားယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ရွှေ့ဆိုင်းထားသည့်တရားစွဲဆိုမှုအားဖြေရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Boeing သည် Seattle အခြေစိုက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Boeing ကိုရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်တိုင်ကြားမှုသည် Ft ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်?
ဘိုးအင်းကာကွယ်ရေးဥပဒေကုမ္မဏီ Kirkland & Ellis သည်အမေရိကန်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ဆောင် Erin Nealy Cox နှင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်လအနည်းငယ်အကြာတွင် Erin Nealy Cox သည်သူမအစိုးရ၏ထင်ရှားသောအစိုးရအလုပ်မှထွက်ခဲ့ပြီး Kirkland & Ellis သို့ ၀ င်ခဲ့သည်။
Boeing အမှုအားအီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းလိုင်းနှင့် Lion Air လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်သေဆုံးခဲ့သည့်မိသားစု ၃၄၆ ခုအားတရားမျှတမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဤတက္ကဆက်ပြည်နယ်တရားခွင်၏ရလဒ်မှာအကြီးတန်းဘိုးအင်းအမှုဆောင်အရာရှိတ ဦး ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့တွင် eTurboNews Paul Hudson မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် Flyer အခွင့်အရေး။ သူရေးသားခဲ့သည် - Boeing သည်ဒေါ်လာ ၇.၅ ဘီလီယံဒဏ်ငွေချမှတ်ရန် ၇၃၇ မက်စ်လိမ်လည်မှုကြံစည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်.
အတွက်ယနေ့ထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံစာ ကော်ပိုရိတ်ရာဇဝတ်မှုသတင်းထောက် အမေရိကန်တရားရေးဌာနကိုတရားစွဲဆိုသည့်ရှေ့နေချုပ်သည်အမေရိကန်ရှေ့နေဟောင်း Erin Nealy Cox သည် Boeing ငှားရမ်းထားသည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးသူမတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Ft ။ in တွင်ရှိသောဘိုးအင်းကိုအရေးယူခြင်း ထိုက်တန်သော, တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဤတစုံတခုမှအဆက်အသွယ်မရှိသောကတည်းကအစကနေအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအရ, အမှုရွှေ့ဆိုင်းတရားစွဲဆိုမှုသဘောတူညီချက်နှင့်အတူဖြေရှင်းခဲ့သည် ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကကိုလံဘီယာဥပဒေပါမောက္ခဂျွန်ကော်ဖီ - "ငါတွေ့ခဲ့သမျှတွင်အဆိုးဆုံးရွှေ့ဆိုင်းခြင်းတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ "
The Ethnician Airline လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင် ၂၄ နှစ်အရွယ်သမီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Michael Stumo နှင့် Nadia Milleon တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုရာဇ ၀ တ်မှုသတင်းထောက်ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
တရားရေးဌာနမှအစိုးရရှေ့နေများသည် Boeing နှင့်သဘောတူစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့် (Boeing ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်းဟောင်းဒန်းနစ်မူအီလင်ဘတ်နှင့်ဘိုရင်းကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာပေါ့ဆမှုနှင့်လိမ်လည်မှုများကြောင့်ရှမာယာသေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ပါ” ဟု Stumo နှင့် Milleron တို့ကသတင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ တရားရေးဌာနကတက္ကဆက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဘာကြောင့်ရွေးကောက်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးတယ်။ ဘိုးအင်းနှစ်သက်သောတရားသူကြီးတစ် ဦး လား။ Boeing ၏ရာဇ ၀ တ်မှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုသိသောလိုက်လျောညီထွေသောအစိုးရရှေ့နေများသည်လား။ ဒါကသတင်းအချက်အလက်အသစ်ကိုထိတ်လန့်စရာပါပဲ။
စားသုံးသူအုပ်စု Paul Hudson Flyer အခွင့်အရေး ကိုပြောသည် eTurboNews ဤကိစ္စသည်“ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပါတီများအတွက်ထောင်နှင့်ချီသောအစိုးရ ၀ န်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ရန်သွားလာနေသောလှည့်လည်နေသောတံခါးပေါက်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အလှည့်ကျတဲ့တံခါးကိုသယ်ဆောင်ခါးပတ်မလုပ်ဘူး။
Hudson ကနိဂုံးချုပ်ပြောကြားသည်မှာ“ အကယ်၍ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေတစ် ဦး သည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတရား ၀ င်မှုတွင်အမေရိကန်အစိုးရကိုကိုယ်စားပြုပြီးမကြာမီကရာဇ ၀ တ်မှုတရားခံပါတီ (သို့) ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ပါ ၀ င်ပါကအသွင်အပြင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများနှင့်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြစ်စေသည်။